MW CMC Oo Kadagay Gambella - Cakaara News
MW CMC Oo Kadagay Gambella
Gambella(CN) Talaado, 8dii December 2015, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay weheliso wasiirka wasaarada adeega shacabka lehna awood raisal-wasaare kuxigeen marwo Aster Mamo iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta galinkii danbe kadagay gagida diyaaradaha ee Gambella iyadoo mas'uuliyiintii kale ee deegaankuna kasoo horeeyeen.
Madaxwaynaha iyo waftigiisa ayaa waxaa si wayn halkaa ugu soo dhaweeyay madaxwaynaha deegaaanka Gambella mudane Gatluak Tut Khot, shacabwaynaha deegaanka oo ay wajiyadooda kamuuqato farxad aad u wayn iyo waliba kooxaha soo dhawaynta ee fanka hidaha iyo dhaqanka ee deegaankaasi.
Kadibna, salaan ay madaxwaynaha iyo waftigiisu kusoo mareen dhamaan soo dhaweeyeyaasha ayaa loo gudbiyay guriga nasashada ee garoonka kuyaala.
Ugudanbayna, waxaa madaxwaynaha loo sii qaaday guriga martida ee qaabilaada khaaska ah isagoo maalinta bari ah si farxadi ku dheehan tahay uga qaybgali doona xuska 10,aad ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubaha dalka. Waxaana xusid mudan in xuskii 8,aad ee maalintan lagu qabtay xarunta deegaanka soomaalida ee jigjiga oo taariikhda baal dahab ah kagashay meesha xuskii 9,aad lagu qabtay